အပေါင်းသွေး, အနှုတ်သွေး (Rh antibodies) စစ်ဆေးခြင်းဆိုတာဘာလဲ - Hello Sayarwon
RH factor ဟာ သွေးနီဥတွေရဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပါရှိတဲ့ ဆက်ခံရရှိတဲ့ ပရိုတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်သွေးမှာ ပရိုတင်းရှိရင် သင်ဟာ RH အပေါင်းသွေး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပရိုတင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ RH အနှုတ်သွေး ဖြစ်ပါတယ်။
RH အပေါင်းသွေးဟာ အတေ့ွအများဆုံး သွေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ RH အနှုတ်သွေး ရှိခြင်းဟာ ဖျားနာခြင်းမဟုတ်ပဲ သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ကိုသာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကြောင့် သင်ဟာ RH အနှုတ်သွေးဖြစ်ပြီး ကလေးအဖေဟာ RH အပေါင်းသွေးဆိုရင် အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်နုချိန်မှာ သွေးအမျိုးအစားသိဖို့နဲ့ RH အမျိုးအစား (အပေါင်းသွေးလား အနှုတ်သွေးလား) ဆိုတာကိုသိစေဖို့ သွေးစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ RH factor ရှိတယ်ဆိုရင် RH အပေါင်းသွေးဖြစ်ပြီးမရှိရင်တော့ RH အနှုတ်သွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သတိထားရမယ့်အချက်တွေကို ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ RH အနှုတ်သွေးဆိုရင် သင့်ကလေးရဲ့ သွေးဟာ RH အပေါင်းသွေး ဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့် သွေးလိုက်ဖက်မှု မရှိပါဘူး။ ဒါကို ကလေးမမွေးခင် အတည်ပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး RH သွေးမလိုက်ဖက်မှုဟာ သင့်ကိုရော သင်ကလေးငယ်ကိုပါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဘာဒုက္ခမှ မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်ရဲ့ သွေးတွေဟာ သင့်ကိုယ်ထဲ ရောက်သွားခဲ့ရင် (ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နဲ့ ကလေးမွေးစဉ်မှာ) သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က RH အပေါင်းသွေးကို တိုက်ထုတ်ဖို့ ပဋိပစ္စည်းတွေ ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင့်သွေးဟာ sensitize ဖြစ်သွားပြီး နောက်တစ်ခါ RH အပေါင်းသွေးရှိတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ထပ်မံကိုယ်ဝန်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ဒီ ပဋိပစ္စည်းတွေက ကလေးရဲ့ သွေးကို တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို ဒီလို antibodies တွေ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကနေ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ။
သတင်းကောင်းကတော့ ကလေးသွေးနဲ့ ထိမိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ RH immunoglobulin ဆိုတဲ့ ဆေးကို ထိုးပေးခြင်းအားဖြင့် RH sensitized ဖြစ်ြခ်ငးကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
RH immunoglobulin ထိုးဆေးမှာ သွေးလှူရှင်တွေကနေ သိမ်းထားတဲ့ ပဋိပစ္စည်းအနည်းငယ်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ ပဋိပစ္စည်းတွေဟာ သင့်ကိုယ်ခန္ဓါ အတွင်းက RH positive သွေးဆဲလ်တွေကို သေစေပြီးတော့ သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်က ပဋိပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းကို တားဆီးလိုက်ပါတယ်။ လှူထားတဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေဟာလည်း သင့် ပဋိပစ္စည်းတွေလိုပဲဖြစ်ပြီးတော့ ပမာဏက သင့်ကလေးငယ်ကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေလောက်အောင် မများတာသာ ကွာခြားပါတယ်။
ဒါကို passive immunization လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဆေး အစွမ်းထက်ဖို့အတွက် ကလေးသွေးနဲ့ ထိတွေ့ပြီးပြီးချင်း ၇၂ နာရီအတွင်းမှာ ထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်မှုဟာ ၁၂ ပတ်ခံပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆရာဝန်က ကလေးသွေး တစ်အောင်စလောက်ဟာ သင့်သွေးနဲ့ ရောသွားခဲ့တယ်လို့ ယူဆရင် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည် ထိုးရနိုင်ပါတယ်။
ဆေးကို လက်မောင်းကြွက်သာ (သို့) တင်ပါးကို ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ အနည်းငယ် နာတာမျိုး (သို့) အဖျားအနည်းရှိတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခြား သိရှိထားပြီး ဖြစ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတော့ မရှိပါဘူး။ ဒီထိုးဆေးဟာ သင့်ကလေးရဲ့ သွေး RH အပေါင်းသွေး ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် စိတ်ချရပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်သွေးဟာ RH အပေါင်းသွေးဆိုရင် ဘာမှ လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
တကယ်လို့ အနှုတ်သွေးဖြစ်ပြီး ကလေးအဖေက အပေါင်းသွေးဆိုရင် ကလေးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ မိန်းမကိုယ်က သွေးထွက်လာရင် ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ immunoglobulin ဆေးထိုးဖို့ကို တိုင်ပင်သင့်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေကို သင့်ရဲ့ RH status အကြောင်းကို ကလေးမွေးစဉ်မှာ ပြောပြဖို့ မမေ့သင့်ပါဘူး။
Blood test for Rh status and antibody screen. http://www.babycenter.com/0_blood-test-for-rh-status-and-antibody-screen_1480.bc. Accessed September 6th, 2016.
Rh factor blood test. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/rh-factor/basics/why-its-done/prc-20013476. Accessed September 6th, 2016.
Rhesus disease – Diagnosis. http://www.nhs.uk/conditions/Rhesus-disease/pages/diagnosis.aspx. Accessed September 6th, 2016.